Adobe Social na Adobe Marketing Cloud | Martech Zone
Adobe Social na Adobe Marketing Cloud
Tọzdee, Disemba 13, 2012 Tọzdee, Disemba 13, 2012 Douglas Karr
Mgbe Adobe mere ịzụta Omniture, enwere m nchegbu na ha ga-ahapụ ya naanị nchịkọta n'ihu na ngwaahịa ndị ahụ ga-efu n'etiti ngwaọrụ mbipụta ha. Ka anyị na ndị ahịa na-arụ ọrụ na-ahụ karịa Adobe Digital Marketing Suite gbakọtara, m na-amalite ịgbanwe onye mọnk. Ule & Ebumnuche bụ nnukwu ikpo okwu na enweghị njikọta na enweghị ike iji nchịkọta na-eme ka ọ dị mkpa.
Ihe na-esote bụ Adobe Social. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Adobe Analytics, Adobe Social bụ ezigbo ntinye iwu.
Adobe Social bụ otu ngwaahịa iji jikwaa ọrụ azụmaahịa na - ejedebe na njedebe - site na ịzụrụ mgbasa ozi, iji bipụta ya na ndị na - eso ụzọ ya na ndị na - eso ụzọ ya, na-akwọ ụgbọala na ịlele nsonaazụ azụmaahịa. Ọ na-anọchite ọ bụghị naanị otu ihe ngwọta maka ọrụ azụmaahịa na-elekọta mmadụ, kama ọ bụ ngwaahịa nwere uru nke ijikọ na Adobe Marketing .gwé ojii iji mee ka mmụba ọtụtụ ọwa na njikarịcha na ngwakọta. Site na Adobe blọgụ.
Adobe depụtara ọtụtụ uru nke Adobe Social:
Gosipụta mgbasa ozi mmekọrịta ROI - Bugharịa karịa Mmasị na mbak site na ijikọ ọrụ mmekọrịta na usoro azụmaahịa na ịchọpụta mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta na-emetụta omume ịzụta na uru ahịa.
Mee ka ahịa gị nwee ike ịchọta njedebe na njedebe banyere ndị ahịa - Jiri nghọta ndị mmadụ na-eme ka ị mata ọrụ ndị ahịa na omume. Hazie ahụmịhe azụmaahịa iji ruo onye ziri ezi
nwere ọdịnaya ziri ezi.
Mee ka arụmọrụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịkwuo mma - Leverage sistemụ arụmọrụ nke ụlọ ọrụ na-eme ka ndị na-ege ntị nọrọ ụwa niile ma zaghachi mkparịta ụka ndị ahịa na mpaghara ebe ha na-edozi njikwa na ijikwa ọchịchị n'ofe nzukọ ahụ.
Tags: adobe ahịa ahịa ahịaAdobe Socialnchịkọta mmadụ mgbasa ozi
Brandwatch Social Media nlekota